महिला फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्स नियुक्त | CYPRUS-NEPAL.COM online news
महिला फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्स नियुक्त
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा ग्यारी फिलिप्सलाई नियुक्त भएका छन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले बिहीबार अस्ट्रेलियाका फिलिप्सलाई महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको जानकारी दिएको छ ।
महिलाको एएफसी एसियन कप छनोट र साफ च्याम्पियनसिपसम्मको लागि एन्फाले फिलिप्सलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो । यस अघि फिलिप्स प्राविधिक निर्देशनको रुपमा काम गरिरहेका थिए ।
गत वर्ष नेपालमै आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) पछि महिला टोली प्रशिक्षकविहिन छ । सागको फाइनलमा भारतसँग पराजित भएपछि मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
← पत्रकार युरोप शाखाको ५२ औॅं शृंखलामा दलित समुदायबाट डा. हरुको सहभागिता
प्रचण्ड-नेपाललाई जसपाको प्रश्न : तपाईहरुको पार्टी कुन हो ? →
नेपाली सेनाद्धारा आज देखि एकिकरण पदयात्रा सुरु..
05/01/2021 newsdesk 0
बाल अधिकार संरक्षणका लागि ४ बुंदे प्रतिबद्धता